राती सुतेको बेला अठाउँछ? डर दिन्छ? रातभर सुत्नुभएको छैन हेर्नुहोस एस्तो छ कारण (भिडियो सहित)
सुत्नु मान्छे को लागि एकदम जरुरी चिज हो। हामी रात परेपछी सुत्छौ अनि विहान उठेर फ्रेश भएर आफ्नो काम गर्न लाग्छौ । तर अब यो सोच्नुहोस कि तपाईं सुतेका बेला तपाईंको अँखा खुल्छ, सबै ठिक भएजस्तै लाग्छ तर जब तपाईं हल्लिन खोज्नुहुन्छ तपाईं सक्नुहुदैन, हात खुट्टा चलाउन खोज्नु हुन्छ तर असमर्थ हुनुहुन्छ ।
डराएर कसैलाइ बोलाउन खोज्नु हुन्छ, आवाज निकाल्न खोज्नु हुन्छ तर सक्नु हुँदैन । आसपासका कुरा देख्नु हुन्छ तर अँखा बहेक अरु कुनै अंग चलेका हुदैनन् । हामीले सुन्ने गरेका छौँ कि कोहि मान्छे सुतेका बेलामा अर्को कुनै मान्छे आएर उसलाई राती अठायो रे । यस्ता घटनामा त्यस्तो भोगेका मान्छेले प्राय कालो डरलाग्दो छायां वा कुनै बुढी मान्छे आएर अठाएको भन्ने कुरा बताएका छन ।
गाउँले परिवेशमा त यस्तै कुराहरुका कारणले गर्दा निर्दोष वृद्धाहरुले बोक्सिको आरोप पाएका हुन्छन र उनीहरु कतिपय ठाउँमा कुटपिटको सिकार पनि भएको समाचार हामिले सुन्दै आएका छौँ । आखिर यो सबै कुरा किन हुन्छ त ? यहि रोमान्चक तथा डरलाग्दो कुराको तथ्य लिएर Factsforyou आएको छ । तल को लिङक थिच्नुहोस अनि हेर्नुहोस निन्द्रा मा आउने भूत को रहस्य ।
Prevनेपालमा रेल आउने कुरा सपना हुदैँ, चिनले सुरु गर्यो दुश्मनी: हेर्नुहोस यी ५ सर्त
Nextसुजताको घाँटी रेटि हत्या गर्ने पक्राउ: यस्तो पाए सजाय